NCCT အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် နိုင်ဟံသာနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက် > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / မေးမြန်းချက် / NCCT အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် နိုင်ဟံသာနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
NCCT အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် နိုင်ဟံသာနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ June 10, 2014 မေးမြန်းချက် Leaveacomment 153 Views
ပြည်တွင်းငြိမ်ချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီ IMNA ရုံးချုပ်၌ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့တွင် နိုင်ဟံသာအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်-(အယ်ဒီတာ)
IMNA-ပထမဆုံးသိချင်တာက ဗမာမဟုတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ဘာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြီး အစိုးရအဆက်ဆက်ကို တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေတာကြတာလဲ?
နိုင်ဟံသာ– လွယ်လွယ်နဲ့ရှင်းရှင်း ဖြေရရင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံမှာ လူမျိုးရေးအရ တန်းတူအခွင့်အရေးမရှိလို့ဖြစ်တယ်။ အာဏာရအစိုးရအဆက်ဆက်ဟာ ဗမာစကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဗမားသမိုင်းတွေကိုပဲ ဦးစားပေးဖော်ဆောင်နေပြီး၊ အခြားတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဘာသာစကား စာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့ သမိုင်းအမွေအနှစ်တွေကို အာဏာနဲ့ ပိတ်ပင်ဖျောက်ဖျက်နေလို့ဖြစ်တယ်။ ရေရှည်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပျောက်ကွယ်ပြီး ဗမာလူမျိုးဖြစ်သွားဖို့ကို လုပ်ဆောင်နေလို့ဖြစ်တယ်။
နိုင်ဟံသာ– ဟုတ်တယ်။ ဒါကြောင့်ထင်ရှားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးတို့က လက်နက်တော်လှန်နေကြတာဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ လူမျိုးအချို့လောက်ကပဲ အမြင်လွဲမှား အစွန်းရောက်နေရင် ဒီလိုတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံက လက်နက်ကိုင်တော်လှန်နေကြမှာမဟုတ်ဘူး။
IMNA-လက်နက်ကိုင်တော်လှန် တိုက်ခိုက်နေတဲ့ နည်းနဲ့မဟုတ်ပဲ အခြားနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းလို့မရဘူးလား?
နိုင်ဟံသာ– တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးပေါ်ပေါက်လာပုံသမိုင်းတွေကို လေ့လာတွေ့ရှိရသလောက် ဒီမိုကရေစီနည်လမ်းအရ သူတို့အခွင့်အရေးတွေကို စတင်တောင်းဆိုကြတာပဲ၊ ဒီလိုတောင်းဆိုလှုပ်ရှားသူခေါင်းဆောင်တွေကို အစိုးရဘက်က ပစ်သတ်၊ ဖမ်းဆီး၊ ထောင်ချ၊ အကြမ်းနည်းနဲ့အရေးယူခဲ့လို့ နောက်ဆုံးမှာ လက်နက်ရှာဖွေ တိုက်ပွဲဝင်လာကြတာ ဖြစ်တယ်။
IMNA-လက်နက်နဲ့ တိုက်ခိုက်တဲ့နည်းနဲ့ဖြေရှင်းရင် မိမိတို့ပြည်သူတွေ ပိုပြီးဒုက္ခမဖြစ်နိုင်ဘူးလား?
နိုင်ဟံသာ– မိမိတို့ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ ရဲဘော်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေဟာ သာမန်ပြည်သူတွေထက် ပိုပြီးဒုက္ခဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိမိတို့လူမျိုးပျောက်ကွယ်မသွားရေးအတွက် ဒီလောက်တော့ စွန့်လွှတ်စွန့်စားအနစ်နာခံကြရမှာပဲ။ ဒီလောကကြီးမှာ လူမျိုးတိုင်းအလိုလိုဟာ မိမိတို့လူမျိုးကို ချစ်ကြတယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးကို ဖိနှိပ်လာရင် အသက်နဲ့လဲပြီး ခုခံကာကွယ်ကြတာ ဓမ္မတာပဲ။
IMNA-ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတဲ့နည်း၊ နိုင်ငံရေးအရ ဖြေရှင်းတဲ့နည်းတွေနဲ့ ပြေလည်ဖို့အဖြေမရှာကြတော့ဘူးလား?
နိုင်ဟံသာ– တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ရင် ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားနယ်မြေမှာ ဖြစ်တာများတယ်။ ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေပိုပြီး ဒုက္ခရောက်ရပါတယ်။ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် အားလုံးတို့ဟာ ဗမာမဟုတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေဖြစ်ကြတယ်။ စစ်မြေပြင်မှာ ကျေးရွာတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရ လူထုတွေပစ်သတ်ညှင်းဆဲ မုဒိန်းကျင့်ခံနေရတဲ့သူတွေဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ပြဿနာကို ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့နည်း၊ နိုင်ငံရေးအရ ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေကို ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က ပိုပြီးလိုလားပါတယ်လို့ ပြောရင် မမှားဘူးလို့မြင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အာဏာရထားတဲ့ အစိုးရဘက်က သဘောတူလက်ခံပြီး လမ်းဖွင့်ပေးမှ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
မေး။ ။အာဏာရ အစိုးရအဆက်ဆက်က ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ ဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်း လမ်းဖွင့်ပေးထားတာမရှိခဲ့ဘူးလား?
နိုင်ဟံသာ– ဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းတာ လမ်းဖွင့်ပေးတာတွေရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရိုးသားမှန်ကန်တဲ့၊ တန်းတူညီတူရှိတဲ့၊ တရားမျှတတဲ့နည်းနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူး။
ထင်ရှားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ထောက်ပြရမယ်ဆိုရင် – ၁၉၅၈ ခုနှစ်မှာ ဖ-ဆ-ပ-လ အတွင်းနှမ်းခြမ်းကွဲပြီး အာဏာရလာတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုခေါင်းဆောင်တဲ့ သန်းရှင်း ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရဟာ အတိတ်ကိုသင်ပုံးချေ၊ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေး အပြည့်အဝပေးမယ်ဆိုပြီး “လက်နက်နဲ့ ဒီမိုကရေစီလဲလှယ်ရေး” ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီအပေါ်မှာ လက်ခံယုံကြည်မိတဲ့ ဆရာတော် ဦးစိန္ဒါ ဦးဆောင်တဲ့ ရခိုင်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးပါတီ၊ ဦးလှဖေ ဦးဆောင်တဲ့ ပအိုဝ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ နိုင်အောင်ထွန်း ဦးဆောင်တဲ့ မွန်ပြည်သူ့ တပ်ဦးတို့ဟာ လက်နက်အားလုံးကို အပ်နှံပြီး ဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့ ဆက်ပြီးလှုပ်ရှားကြတယ်။
၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု အသွင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရေးမူကို ချမှတ်ပြီး လှုပ်ရှားတောင်းဆိုကြတော့ ၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လ (၂) ရက်နေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း ဦးဆောင်တဲ့ တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်။ လက်နက်စွန့်ပြီး ဒီမိုကရေစီမူကို လက်ခံခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ထောင်ထဲရောက်ခဲ့ရတယ်။
၁၉၆၃ ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးကောင်စီအစိုးရဟာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အင်းအားစုအားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မူက “လက်နက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး လဲလှယ်ရေး” ဆိုတဲ့ လက်နက်ချရေးဖြစ်နေတော့ အများကလက်မခံလို့ အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ဘူး။
၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ ဒီမိုကရေစီ လူထုအုံကြွမှုဖြစ်ပေါ်လားပြီး န-ဝ-တ လို့ခေါ်တဲ့ စစ်အစိုးရသစ်တက်လာတယ်။
န-ဝ-တ စစ်အစိုးရသစ်ဟာ ၁၉၈၉ ခုနှစ်ကစပြီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းတွေကို “အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်” သူတို့ရဲ့လုပ်ဟန်က အစပိုင်းမှာ အခွင့်အရေးများများပေးတယ်။ နောက်ပိုင်းလျှော့ချလာတယ်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်ကုန်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အကြွင်းမဲ့လက်နက်ချခိုင်းတယ်။ သူတို့မူကတော့ အပစ်ရပ်ကာလမှာ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးကိုလုပ်စေပြီး လူထူရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့သစ်တက်လာမှ နိုင်ငံတော်ဆွေးနွေးဖို့ပြောထားတယ်။ ဒီလိုအပစ်ရပ်ထားတဲ့ကာလတွေမှာ အားနည်းတဲ့ အဖွဲ့တွေကို လက်နက်သိမ်းခဲ့တယ်။ ၂၀ဝ၅ ခုနှစ်ထဲမှာ ပလောင်အဖွဲ့နဲ့ ရှမ်း (SSNA) အဖွဲ့တွေထံက လက်နက်သိမ်းခဲ့တယ်။ ၂၀ဝ၈ မှာ ပအိုဝ် (ရ-လ-လ-ဖ) အဖွဲ့တွေထံက လက်နက်သိမ်းခဲ့တယ်။ ၂၁၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်မီမှာ အပစ်ရပ်အဖွဲ့အားလုံးရဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေကို နယ်ခြားစောင့်တပ်နဲ့ ပြည်သူစစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ အကြပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။ အဖွဲ့တော်တော်များများက မလွှဲသာပဲ လက်ခံခဲ့ကြရတယ်။
ဒါတွေဟာ လိမ်လည်လှည့်စားတဲ့နည်း အကြပ်ကိုင်တဲ့နည်းတွေဖြစ်တယ်။ ဒီလိုရိုးရိုးသားသား မှန်မှန်ကန်ကန် တရားမျှတမှုရှိရှိနဲ့ မဖြေရှင်းခဲ့လို့ ဒီကနေ့အထိ မပြေလည် မအေးချမ်းနိုင်တာဖြစ်တယ်။
IMNA-ဘယ်လိုဖြေရှင်းနည်းတွေက မှားယွင်းပြီး ဘယ်လိုဖြေရှင်းနည်းနဲ့မှ ပြေလည်နိုင်မယ်လို့မြင်ပါသလဲ?
နိုင်ဟံသာ– အာဏာရ အစိုးရအဆက်ဆက်ဟာ စစ်အင်အားကို အားကိုးပြီး တိုက်ရိုက်ချေမှုန်းတဲ့နည်းကို အဓိက ကျင့်သုံးခဲ့တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း ဦးဆောင်တဲ့ စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ တပ်အင်အားကို အကြီးအကျယ် တိုးချဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာ လူထုအားကိုပါသုံးပြီး ဖြတ်လေးဖြတ်နည်းဗျူဟာနဲ့ ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ရဲ့ နည်းနာတွေနဲ့ တိုက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုစစ်အင်အားနဲ့ တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတာဟာ (၆၅)နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာ ဘယ်လူမျိုးစုအဖွဲ့ကိုမှ ကျေပြုန်းသွားအောင် ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့တာ မရှိခဲ့ဘူး။
နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့လှည့်စား၊ လိုအပ်ရင်အင်အားကိုပါသုံးပြီး ဖိအားပေးတဲ့နည်းနဲ့ လက်နက်တွေအားလုံးကို သိမ်းယူတဲ့နည်းနာတွေကိုလည်း သုံးခဲ့တယ်။ ဥပမာ – ၁၉၅၈ ခုနှစ်မှာ ပအိုဝ်၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ၂၀ဝ၅ မှာပလောင်နဲ့ ရှမ်း၂၀ဝ၈ မှာပအိုဝ် (ရ-လ-လ-ဖ) အဖွဲ့တွေရဲ့လက်နက်တွေကို သိမ်းယူခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအတွက် ဘာအခွင့်အရေးမှ တိုးပေးခဲ့တာမရှိဘူး၊ ဒီတော့မကျေနပ်တဲ့ နောက်လူတွေက လက်နက်အသစ်ရှာပြီး ပြန်တိုက်တာပဲ၊ ဒီလိုမမှန်ကန်တဲ့နည်း မတရားတဲ့နည်းတွေနဲ့ပဲ ဖြေရှင်းခဲ့လို့ပြည်တွင်းစစ် (၆၅)နှစ်ကျော်ကြာညောင်းခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုပြည်တွင်းစစ်ကြီး ရေရှည်ဖြစ်နေတော့ ပြည်သူတွေလည်း ဒုက္ခရောက် တိုင်းပြည်လည်းခေတ်နောက်ကျနေရတာပေါ့။
မှန်ကန်တဲ့ ဖြေရှင်းနည်းကတော့ အတူနေလူတွေအချင်းချင်းကြားမှာ နားလည်မှုနဲ့ကျေနပ်မှုရှိကြဖို့လိုတယ်။ အင်အားသုံး အာဏာသုံးပြီး တဖက်သတ်အနိုင်ယူတဲ့ နည်းနဲ့ဖြေရှင်းရင် ခံရတဲ့လူတွေဘက်က ကျေနပ်လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျေနပ်လက်ခံနိုင်မှုမရှိရင် ညီညွှတ်ရေးကို တည်ဆောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်သူများအားလုံးပါဝင်ပြီး တန်းတူတဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့ တရားမျှတတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့နည်းနဲ့သာ ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ဒါကိုသက်ဆိုင်သူတွေ လေးလေးနက်နက် သဘောပေါက်လက်ခံပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ နဲ့ အကောင်ထည်ဖော် ဖြေရှင်းရင် အချိန်တိုအတွင်းမှာ ပြေလည်နိုင်ပါတယ်။
IMNA-အခုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (NCCT) နဲ့ အစိုးရရဲ့ပြည်ထောင်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ (UPWC) တို့နဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနေကြရာမှာ အဓိက အားဖြင့် ဘယ်အချက်တွေမှာတစ်ဆို့နေတာလဲ?
နိုင်ဟံသာ– အဓိက အကျဆုံးအချက်တွေကတော့ ဗမာမဟုတ်တဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေ တလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့တဲ့ အမျိုးသားတန်းတူရေး ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နဲ့ စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စု(ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု) တည်ဆောက်ရေးကို အစိုးရဘက်က လက်မခံတာဖြစ်တယ်။ ဒီအပေါ်မှာဝေဖန်ရရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအချင်းချင်း အကြားမှာ အမျိုးသားတန်းတူရေးကို လက်မခံနိုင်တာက မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒစွဲကပ်နေလို့ပါပဲ၊ ပြည်နယ်တွေ အခြားလူမျိုးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေးကို လက်မခံနိုင်တာက သူတစ်ပါးအပေါ်စိုးမိုးချယ်လှယ်ချုပ်ကိုင်ချင်လို့ပါ၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုလို့ခေါ်တဲ့ စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းရေးကိုလက်မခံနိုင်တာဟာ နာမည်ခံအတုအယောင်ပြည်ထောင်စုနဲ့ ဆက်လက်ကြိုးကိုင်ကြီးစိုးသွားချင်လို့ပဲ ဖြစ်မယ်လို့မြင်တယ်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာ နိုင်ငံတော်ကခွဲထွက်တာနဲ့ နိုင်ငံရဲ့အချုပ်ခြာအာဏာကို ထိပါးစေတာကလွဲပြီး အားလုံးကိုဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေလိုလားနေတဲ့ ဖက်ဒရယ်မူကို အခြေခံတဲ့ ပြည်ထောင်စုကို ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောနေတာရှိတယ်။ လွှတ်တော်ကလည်း ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံအချို့ကို လေ့လာရေးအဖွဲ့ စေလွှတ်ပြီး လေ့လာနေတာတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်ဆွေးနွေးတဲ့ဝိုင်းထဲမှာ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက “ဖက်ဒရယ်” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို လုံးဝလက်မခံဘူး။ အမျိုးသားကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေးကိုလည်း ဥပဒေနှင့် အညီဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဖြည့်ပြီး ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ထားချင်တယ်။ ကျနော်တို့ (NCCT) ဘက်က တောင်းဆိုတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ဆိုတဲ့အထဲမှာ ခွဲထွက်ရေးမပါပါဘူး။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအားလွှဲအပ်ထားပြီး ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်ပြည်နယ်အစိုးရတွေက လွတ်လွတ်လပ်လပ်ချမှတ်လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ ဒါကိုလည်း သူတို့ဘက်ကလက်မခံနိုင်ဘူး။
IMNA-သူတို့ဘက်ကတင်ပြတောင်းဆိုချက်တွေအပေါ် (NCCT) ဘက်က လက်မခံနိုင်တာဘာရှိလဲ?
နိုင်ဟံသာ– အဓိကကျတဲ့အချက်တွေကတော့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုမှာ တပ်မတော်တခုထဲထားရှိရေးမူအရ ကျနော်တို့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကို မြန်မာ့တပ်မတော်လက်အောက်မှာ ပူးပေါင်းထည့်သွင်းရေးကို သူတို့ကလိုလားတောင်းဆိုနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ဘက်က ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့အညီ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်ဖြစ်အောင် ပြုပြင်ချင်တယ်။ တပ်မတော်ဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အညီ အရပ်ဘက် ဦးဆောင်မှုကိုခံယူရမယ်၊ အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်က ကင်းလွတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူး။ လူတစ်စုထဲကကြိုးကိုင်ပြီး လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကို အကျိုးပြုနေတဲ့ တပ်မတော်မျိုးမဖြစ်သင့်ဘူး။ တပ်မတော်အနေနဲ့ ပြည်ပရန်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုသာ ဇောင်းပေးတာဝန်ယူပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဝင်မပါသင့်ဘူးလို့ မြင်တယ်။
ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာ ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်း သင့်တော်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ပူးတွဲဲတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံကို ကာကွယ်ဖို့ကျနော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေမှာလည်း တာဝန်ရှိပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကို ပုံဖော်ဆုံးဖြတ်မယ့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံကြီးမှာ ကျနော်တို့တင်ပြတောင်းဆိုနေတဲ့ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အင်အားစုများရဲ့ ကိုယ်စာလှယ်နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများရဲ့ကိုယ်စာလှယ်များ အချိုးညီပါဝင်တဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်ပုံစံ ညီလာခံကြီးကျင်းပဖို့ကိုတော့ သူတို့ဘက်က(၈)ပွင့်ဆိုင် ပုံစံမျိုးကို အဆိုပြုလာတယ်။ သူတို့တင်ပြတဲ့ (၈)အုပ်စုကတော့ အစိုးရ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ တပ်မတော်၊နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့ နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့များ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စာလှယ်များ၊ စီးပွားရေးအသင်းဝင်များ၊ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရှင်အစုဖွဲ့များဖြစ်တယ်။ ဒါကသူတို့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ သူတို့အကြိုက်ဖန်းတီးရယူနိုင်ဖို့ကို ဦးတည်တယ်လို့မြင်တယ်။ ညောင်နှစ်ပင် အမျိုးသားညီလာခံလိုပဲ ဆိုပါစို့။
IMNA-ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ တပြည်းလုံးပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ အခြေခံမူနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါလား?
နိုင်ဟံသာ– ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က လာရောက်ဆွေးနွေးတဲ့ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို သူတို့အခြေခံမူ(၆)ချက်ကို ပေးလာတယ်။ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်း ဆွေးနွေးပွဲမှာ အဲဒီ(၆) ချက်ကို တင်ပြကြတယ်။အဲဒီမှာနံပါတ် (၁) ကနေ` (၄) အထိဟာ ပြသာနာမရှိဘူး။ နံပါတ်(၅)မှာက အပစ်ရပ်ပြီးရင် တည်ဆဲဥပဒေအားလုံးကို ကျနော်တို့ဘက်က အပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါဟာ ကျနော်တို့ပါးစပ်တွေကို ပိတ်လိုက်တာ၊ တနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံရေးအရ လက်နက်ချခိုင်းတာမျိုးဖြစ်တယ်။ တန်းတူရေးနဲ့တရားမျှတမှု မရှိတာကိုပြတယ်။ နံပါတ်(၆) ကတော့၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လက်ခံခိုင်းပြီး ပြဌာန်းထားတဲ့မူအရ အများဆန္ဒနဲ့ပြင်ဆင်သွားဖို့ကို ပြောထားတယ်။ ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လက်မခံနိုင်လို့ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များက အခုဆက်ပြီးတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်။ လက်ရှိ လွှတ်တော်ထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရော၊ ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ၊ နိုင်ငံရေးအင်အားစု၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ပြည်သူအများစုက ဒီဖွဲ့စည်းပုံးအခြေခံဥပဒေကို မကြိုက်လို့ ပြင်ဆင်တောင်းဆိုနေကြတယ်။ ဥပဒေဘောင်ထဲက ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာကို ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က သဘောတူလက်ခံမှ ပြင်လို့ရမယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ လွှတ်တော်ထဲမှား၂၅% ပါဝင်နေတဲ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးဟာ သူတို့အမိန့်ကို နာခံနေရတာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာ ကျနော်တို့ကို လက်ခံခိုင်းတာဟာ လုံးဝမသင့်တော်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ ဒါကလည်း တန်းတူမှုနဲ့ တရားမျှတမှု မရှိတဲ့ ရပ်တည်မှုတွေပါ။
IMNA-နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြည်သူတွေကို ဘာများဖြည့်စွက် အသိပေးပြောကြားချင်ပါသလဲ?
နိုင်ဟံသာ– ကျနော်တို့နိုင်ငံဟာ တန်းဖိုးကြီးမားတဲ့ သဘာဝသယံဇာတတွေများစွာ ထွက်ရှိနေပေမယ့် ပြည်သူလူထုအများစုဟာ အလွန်ကို ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြရပါရတယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းစာရင် ကျနော်တို့နိုင်ငံဟာ အလွန်ကိုခေတ်နောက်ကျနေပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ပြည်တွင်းစစ်(၆၅) နှစ်ကျော် ဖြစ်ပွားနေခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်တွေပဲ၊ ဒီပြည်တွင်းစစ်ကို ရိုးရိုးသားသား မှန်မှန်ကန်ကန် တန်းတူမှုရှိရှိ တရားမျှတမှုရှိရှိ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာမဖြေရှင်းကြဘူးဆိုရင် နောက်ထပ် (၆၅)နှစ်ကြာရင်လည်း ဒီပြည်တွင်းစစ်ကို ရပ်စဲနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုစစ်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေရင် အနာဂတ်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝ ဘယ်အဆင့်ရောက်သွားကြမလဲ။ ကျနော်တို့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံဟာလည်း ဒီအတိုင်းရှိချင်မှ ရှိနေပါလိမ့်မယ်၊ လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးအကြား အမုန်းပွားမှုကြီးမားလွန်းရင် တိုင်းပြည်အစိပ်စိပ်အမွှာမွှာ ပြိုကွဲသွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် အာဏာရ ဗမာခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင် သက်ဆိုင်သူအားလုံး ကျနော်တို့နိုင်ငံ အမြန်အေးချမ်းတိုးတက်ဖို့ မှန်ကန်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှင်းတဲ့နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့တွန်းအားပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်း မှာကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Previous ရေးမြို့နယ် ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကိစ္စ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ် စုံစမ်း
Next မွန်ကျောင်းသားများ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် အောင်မြင်